ဆွီဒင်ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးဒီဇိုင်နာများတစ်ခုမှာ - Ida Sjöstedtနှင့်အတူအင်တာဗျူး - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
ယခုတွင်ငါသည်အတော်လေးအချို့နှစ်ပေါင်းဆွီဒင်ဒီဇိုင်နာ Ida Sjöstedtနောက်တော်သို့လိုက်ကြပါပြီ - 2004 အတွက်သူမ၏က်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်နှင့်သူမ၏ထံမှသတို့သမီးဂါဝန်မိန့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမှ, Guldknappen မှာသူမ၏အဘို့မဲပေးမှ - ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အကောင်းဆုံးဆွီဒင်ဒီဇိုင်နာ 2013 များအတွက် Reader ကိုရဲ့ရွေးချယ်မှု Award ဆု သူမတကယ်တတန်းနှစ်နှစ်ရခဲ့ပါ - 2011 နှင့် 2014 ၌တည်၏။ သူမလည်း 2011 နှင့် 2015 အတွက် ELLE Gala မှာတစ်နှစ်တာဒီဇိုင်နာများအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံခဲ့ရ, သူဇွန်လ 2015 အတွက်မင်းသားတဲ့ Carl Gustaf နှင့်အတူသူမ၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအတွက်မင်းသမီးလေးဆိုဖီယာ Hellqvist ရဲ့သတို့သမီးဂါဝန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ ဒီတော့ Ida Sjöstedtထောက်ခံချက်၏နံပါတ်ရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်ရင်ခုန်စရာဖက်ရှင်၏ကြည်ညိုလေးစားမှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ငါဇာ, ပုတီး, tulle နှင့်ပန်းပလီကေးရှင်းနှင့်အတူသူမ၏ဣတ္စတိုင်ချစ်ကြတယ်။ ငါသည်လည်းသူမဆင်း-to-မွကွေီးပျေါမှာကို non-ဟန်ဆောင်သည်နှင့် Monki, JC, IKEA နှင့် Coca-Cola ကအဘို့အလိုင်းများဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပြီးချစ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့်စတော့ဟုမ်းဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်နွေဦးသည်နွေရာသီ 2016 နှင့် 2017 မှာသူမ၏ဖက်ရှင်ရှိုးသွားစစ်မှန်တဲ့လာမယ့်အိပ်မက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
စစ်မှန်တဲ့လာနောက်ထပ်အိပ်မက် Ida တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းခဲ့သည်။ ငါသူမ၏ PR စနစ်အေးဂျင့်ကိုဆက်သွယ်နှင့်စတော့ဟုမ်းဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်၏အပေါငျးတို့သဘက်ဇ်အပြီးအင်တာဗျူးများအတွက်သူမ၏တွေ့ဆုံရန်စီစဉ်ခဲ့သည်။ Stureplan အလယ်၌တရားဖြစ်မှာပါanice ဘစ်စထရိုနှင့်ထဲမှာလူအစုအဝေးနှင့်အတူပေါ်ပြူလာ - ငါစတော့ဟုမ်းအတွက် Taverna Brillo မှာတွေ့ဆုံအကြံပြုသည်။
Ida ဟေ့! ငါဒီဇိုင်နာအဖြစ်ကယ့်ကိုသငျသညျကဲ့သို့သင်တို့အ SS17 စုဆောင်းမှုနဲ့ကျွန်မကိုချစ်၏။ သင်၏အဝတ်များ၏စတိုင်လ်ဆှီဒငျအနည်းဆုံးအနေဖြင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ သင်ပိုပြီးရင်ခုန်စရာစတိုင်အဝတ်ဒီဇိုင်းစေချင်ကြောင်းစတင်ခဲ့သည့်အခါသင်ကအရမ်းအစမှသိကြသလား?
ကျွန်မငယ်ရွယ်စဉ်အခါငါဒီဇိုင်းစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်အစဉ်မပြတ်ငါအသစ်အဆန်းပစ္စည်းများမှရေးဆွဲခဲ့ကြ - တောက်ပနေ, ဇာ, ဘာမှမျက်စိဖမ်း။ ဒါဟာငါဆိခဲ့ကအမြဲရှိခဲ့ကတည်းကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးကြပြီအရာဖွစျသညျ။ စက်ချုပ်, ဒီမှာစတော့ဟုမ်းအတွက် sawing လေ့လာနေပြီးနောက်, ငါနည်းနည်းပိုပြီးအပျော်အပျက်ဖြစ်သောဗြိတိသျှဖက်ရှင်မြင်ကွင်းတစ်ခုကပိုပြီးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြီထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း၌ငါ့ဒီဂရီယူဘယ်မှာလန်ဒန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ငါ 18 ခဲ့ကတည်းကငါစိန်ခေါ်မှုစိတ်ဝင်စားခဲ့သို့မဟုတ် "ကောင်းသောအရသာ" စဉ်းစားခဲ့ရာမေးမြန်းခဲ့ကြသည်။ နှင့်ဆွီဒင်ကောင်းသောအရသာ၌ဤဂန္ပိုပြီးပုလ် silhouette နှင့်အတူချိတ်ဆက်ထားသည်။ ငါဆွီဒင်လူကဒီမှာစတင်ခဲ့သည့်အခါအမြဲ, kitschy နည်းနည်းအဖြစ်ထိပ်ဆုံးကျော်နည်းနည်းငါ၏အ collection များကိုဖော်ပြထားလွန်းဣတ္။ ငါ SFW SS16 ပြီးနောက်ငါ၏အစုဆောင်းခြင်းများအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုဖတ်ရှုရသောအခါထိုသူတို့က "Ida အဆိုပါ kitschy ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးယခုမှသာရင်ခုန်စရာနဲ့လှပတဲ့ဖြစ်ပါတယ်" ။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကမှန်သည်ထင်ကြဘူး, ငါကဒီမှာကလူ့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဖို့အသုံးပြုဆည်းပူးခဲ့ကြလို့ထင်ပါတယ်။ နှင့်လည်းငါတို့ယခုပြသစုဆောင်းခြင်းမျိုးအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟောင်းများအတွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပန်းနေကာမျက်မှန်, ပန်းထိပ်ဖျားနှင့်ဤစုဆောင်းမှုအတွက် sequined ဘောင်းဘီတို။ "! ဒါ kitschy ဖြစ်ပါတယ်စေသောအကြှနျုပျ၏ဘုရားသခငျ" ယခုမှာကဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကိုပိုပြီးနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်လူတွေကိုအသုံးပြုကြသည်ဖြစ်ပါသည်: ငါစတော့ဟုမ်းဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်5နှစ်ပေါင်းမှာဒီပြသခဲ့မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့လူတိုင်းပြောဆိုကြပြီမယ်။
သင့်ရဲ့နွေရာသီစုဆောင်းခြင်း 2017 ငါ့ကို Chanel နဲ့နည်းနည်း Versace တစ်နည်းနည်းသတိပေးခဲ့သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ငါပစ္စည်းများ, အပုတီးကို၎င်း, pastel အရောင်များ Chanel ကိုချစ်။ ကျွန်မအဖြစ်ကောင်းစွာ Versace ကြိုက်တယ် - ထို 80s အချို့ကိုဒစ္စကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ငါသည်သင်တို့ကိုဘုံအမှုအရာ, ဒီဇိုင်နာများမှကွဲပြားခြားနားသောညွှန်းဆိုတွေအများကြီးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်မအထူးသဖြင့် Chanel သို့မဟုတ် Versace မှာရှာဖွေနေခဲ့ကြကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုသို့အမှု၌ သာ. မသိစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကလည်းရာသီမှတစ်ရာသီကနေမူတည်ပါသည်။ Rodarte တစ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်သစ်ကိုဒီဇိုင်နာများအနေဖြင့် Chanel, Valentino ။ ထိုအခါစီးပွားဖြစ်ငါမာ့ခ် Jacobs ကိုချစ်နှင့်လည်းငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ဝတ်ဆင်လိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Miu Miu အခြားအကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ ထွက်ပြေးသွားတဲ့ရှိုးပွဲကိုငါအလက်ဇန်းဒါး McQueen ကအမြဲအခြားကမ္ဘာသို့သငျသညျယူမယ့်အံ့မခန်းရှိုးလုပ်နေတာထားပြီးစဉ်းစားပါ။ ဒါဟာပရိသတ်ကိုတစ်ဦးခံစားချက်ပိုပေးခြင်းထက်ကိုယ့်တစ်ဦးကြည့်စာအုပ်တွင်ဖေါ်ပြခြင်းအကြောင်းပါ။ ဂီတ, အ set ကိုဒီဇိုင်း - - ငါတပြင်လုံးကိုသေးငယ်တဲ့မိုက်ခရိုအတွေ့အကြုံကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်ဖို့ကြိုးစားလည်းငါအဘို့အရည်ရွယ်ထားကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်။
ငါ 10 နှစ်အရွယ်မှာငါ့ကိုယ်ပိုင်အဝတ်အောင်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ငါဆွီဒင်အတွက်အထက်တန်းကျောင်းစတင်ခဲ့သည့်အခါကျွန်မစက်ချုပ်နှင့်ဒီဇိုင်းလေ့လာနေစတင်ခဲ့ပြီး, ငါ ပို. ပင်ငါလုပ်ချင်တစ်ခုခုခဲ့ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချတယ်။ ထိုအခါငါလန်ဒန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်နောက်မှသူကပဲပေါ်မယ့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်အကြှနျုပျအဘို့ကိုအခြားရွေးချယ်စရာရှိခဲ့သည်ကြပြီမဟုတ်။ ငါစတင်ခဲ့သည့်အခါကျွန်မအဖြစ်ကောင်းစွာဖက်ရှင်အတွက်နည်းနည်းဆုံးမဩဝါဒ ပေး. , ပုံစံနှင့်အတူစျေးဆိုင်များတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်တစ်နည်းနည်း။ ဒါကြောင့်ကျွန်မအတော်လေးအနည်းငယ်လမ်းကြောင်းကြိုးစားခဲ့ကြလို့ထင်ပါတယ်။ ငါသည်လည်းအနည်းငယ်ဒီဇိုင်နာများကူညီခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသောဤဒေသများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီနှင့်ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။
သငျသညျထင်သည့်အခါမဆိုမှတ်ရှိခဲ့ပါသည် "ကျွန်မအရှုံးမပေးသွားနေပါတယ်, အိုးသည်ဤသိပ်ခက်ခဲပါ!"?
ဟုတ်ပါတယ်။ ငါနီးပါးအရှုံးမပေးရန်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာတဦးတည်းအချက်တစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ငါကအရမ်းခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဒါဟာ 2006 န်းကျင်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့အလွန်ရာသီကျနော်တို့အတော်လေးတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အရောင်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ငါအားဖြင့်, ငါ၏ချိုးရတယ်။ ဒါကြောင့်ငါအမှတ်မှာ, သင်တန်း, ရပ်တန့်နိုင်ဘူး။
အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုများပိုက်ဆံနှင့်အချိန်ရှိကြ၏။ အတိတ် 4-5 နှစ်ပေါင်းငါဒါငါတကယ်တော့ဘူးရှည်နာရီအလုပ်လုပ်ကြဘူးအလုပ်ကလူရှိသည်။ ကကောင်းတစ်ဦးဘဝကိုပေမယ့်လာသောအခါငါ 17,00 / 24 အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်စတင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျနော်အများအားဖြင့်7မှာအိမ်ပြန်သွားပါ။ သင်တစ်ဦးဒီဇိုင်နာအဖြစ်စတင်ပါလာသောအခါဒါကြောင့်သင်မကြာမီကြီးမားတဲ့စတိုးဆိုင်ထဲကနေကြီးမားတဲ့အမိန့်ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်သင်ကသင်ကထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သင်စတိုးဆိုင်ကနေမဆိုပြန်လာရမတိုင်မီထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စေခြင်းငှါငွေရှိသည်ရှိသည် get ပါဘူးအခါ။ ဒါကြောင့်တကယ်သယ်ဆောင်ရန်လေးလံသောအလေးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
အမှတ်ကုမ္ပဏီ 100% ငါ့ကိုကပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ငါကဒီလမ်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်ချင်ပါတယ်ဖြစ်ခြင်းအချိန်ကိုအဘို့ဖြစ်၏။ ငါသည်လည်းတဖြည်းဖြည်းပေမယ့်ဧကန်အမှန်တကယ်စိုက်ပျိုးကြသည်။ အကြှနျုပျ၏ကုမ္ပဏီနေဆဲအတော်လေးသေးငယ်သည်သို့သော်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်ရန်အဘယ်အရာကိုထိန်းချုပ်အတွက်ဖြစ်ချင်တယ်။
ကျနော်တို့ကစတိုးဆိုင်များများအတွက်ထုတ်လုပ်ရန်အဆိုပါ collection များကိုယခုတွင်ငါသည်နီးပါး 100 နှစ်ပေါင်းအတူလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြကြောင်းစက်ရုံတစ်ရုံ၌, လစ်သူအတွက်ထုတ်လုပ်နီးပါး 10% ရှိပါတယ်။ နှင့်ပုဂ္ဂလိက client များအတွက်အပေါငျးတို့သ couture ဆင်မြန်းစတော့ဟုမ်း၌ငါ့ကိုယ်ပိုင်စတူဒီယိုအတွက်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့က start ကနေ finish ကိုမှထိန်းချုပ်မှုရှိသည်ကြောင့်သူတို့ကိုငါကြိုက်တယ်။ ကျနော်တို့ဖောက်သည်သူတို့ပျော်ရွှင်% 100 ကြသည်မဟုတ်လျှင်စားဆင်ယင်နဲ့အတူစွန့်ခွာသွားသည်မဟုတ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။
ဒါဟာပြောဖို့ခက်သည်။ ကျနော်တို့တစ်နှစ်လျှင် 5-6 collection များကိုစကားပြောနေကြသည် - ငါကနောက်ဆုံးနှစ်များတွင်လည်းအစာရှောင်သွားခဲ့ပြီထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်သိပ်ထုတ်လုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြီးတွေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကကိုယ့်အဖြစ်ကိုကောင်းစွာရပ်တန့်ရန်ခက်ခဲသည်ထင်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကလွှမ်းမိုးခံရဖို့မကြိုးစားနဲ့ကျွန်မအပေါ်ရပ်တည်ရန်နှစ်ပေရှိသည်သောကြောင့်, တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ခုသာ collection များကိုအောင်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ couture စောင့်ရှောက်ခြင်းစောင့်ရှောက်လော့။
အဘယ်သို့ငါအရှိဆုံးကိုချစ်ဖန်တီးမှုဖြစ်ခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲတိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား, ငါသည်ငါ့တံဆိပ်နှင့်အတူလိုချင်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာငါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများချင်ကြပါဘူးဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ "သင် 10 ဆပိုရောင်းဖို့ရှိသည်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမ, သင်သည်ဤမပွုနိုငျ": ငါ့အအကြီးမားဆုံးကွောကျရှံ့သောင့်သညျကား, Excel ကိုပြန့်ပွားစာရွက်များနှင့်အတူထိုင်နှင့်အမြတ်အစွန်းရေတွက်သူတစ်ဦးရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်ဖန်တီးမှုဖြစ်ချင်တယ်။ ငါသည်ဤသည်လည်းငါ၏အအောင်မြင်မှုရဲ့သော့တစ်ခုဖြစ်သည်ထင်ပါတယ်။ ဆွီဒင်တွင်ငါအစအဦး၌ငါ၏တံဆိပ်ပြသသည့်အခါသောကြောင့်, လူတွေ said: "အိုးသင်ပိုမိုရောင်းချနိုင်ရန်အတွက်အဖြစ်ကောင်းစွာတဲ့စျေးသက်သာလိုင်းရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်" ။ သို့သော်လည်းငါသည်ငါ၏အထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူငါစျေးနှုန်းများကိုနှိပ်လို့မရဘူးခံစားရတယ်။
ကျနော်တို့ဆွီဒင်အတွက်အများအားဖြင့်ရောင်းချရန်။ ကျနော်တို့အင်တာနက်ပေါ်ရှိနိုင်ငံတကာကပေမယ့်အများအားဖြင့်ရောင်းလုပ်ပါ။ အဆိုပါ couture ဆင်မြန်းဘို့ငါတို့ဖောက်သည်အများဆုံးဆွီဒင်ဖြစ်ကြပေမယ့်ကျနော်တို့ရုရှား, အမေရိကန်, သြစတြေးလျကနေလူများအတွက်ဆင်မြန်းလည်းစေပြီ။ ငါဆွီဒင်အတွက်နာမည်တစ်ခုဖြစ်ခြင်းထက်နယူးယောက်ဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်သွားအဲဒီမှာနာမည်တစ်ခုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံတကာကပိုပြီးလွှမ်းခြုံရလုပ်ပေးနိုင်အောင်ဥပမာ Style.com စတော့ဟုမ်းဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
အဆိုပါမျှဝေစီးပွားရေးကိုစဉ်းစား, ဒုတိယလက်အဝတ်ကိုဝယ်ယူသောလူ, သင်သည်ဤ Haute couture ကိုသတ်လိမ့်မယ်ထင်သလဲ
ငါသူတို့-တည်ရှိပူးတွဲပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူတို့လုပ်-to-အတိုင်းအတာသူတို့အသက်အဘို့စောင့်ရှောက်ချင်နေတဲ့စားဆင်ယင်စေသောအခါငါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Haute couture clients များ, အထူးသဖြင့်သတို့သမီးဖောက်သည်ကိုငါသိ၏။ သို့သော်လည်းငါသည်အမှန်တကယ်အတော်လေးအနည်းငယ်အခြားလူများကသူတို့ကိုဒုတိယလက်ရောင်းချကြောင်းကိုငါသိ၏။ ငါစားဆင်ယင်နေတဲ့ဒုတိယဘဝကိုရှိသည်ဖို့သွားသိသောကြောင့်ငါကြိုက်တယ်။ ဒုတိယလက်ကဝယ်ယူအဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ကောင်းကပထမဦးဆုံးလက်ကိုဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံမရှိပါ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကပထမဦးဆုံးလက်ကိုဝယ်ထက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဥပမာထုတ်လုပ်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံများတွင်လုပ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခု, ငါ့စားဆင်ယင်ဒုတိယလက်ဝယ် သာ. ကောင်း၏။ တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တံဆိပ်ဒုတိယလက်မှတစ်ခုခုဝယ်ကြောင့်ငါတို့သည်အချို့သောပိုက်ဆံရဖို့လုပ်ပေးနိုင်အောင်ပြောင်းလဲရကျွန်တော်တို့ကိုလာကြသူ clients များရှိသည်။ သင်ရုံ ပို. ပို. ထုတ်လုပ်မထားနိုင်ပါ။ ငါငါတို့ရှိသမျှသည်ဝေမျှခြင်းကိုစီးပွားရေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောအရာကိုကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှလုပ်ဖို့ကြိုးစားသင့်စဉ်းစားပါ။
ဆရာမသို့မဟုတ်သတင်းစာဆရာ, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖန်တီးမှုတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်သည်။ ငါ SU, Forsberg နှင့်ဒီဇိုင်း Beckman ရဲ့ကျောင်းစာအုပ်မှာဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့ပါသည်။ ငါဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအကြိုးကွောငျးကိုခံစားရပြီးကျွန်ုပ်ဖက်ရှင်အတွက်နှင့်သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲတကယ်စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသောကျောင်းသားများမြင်နေကြိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်မအစားဒါဖန်တီးမှုမဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုထက်ကြောင်းပြုပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်အစဉ်အမြဲငါဒီလုပျနိုငျမျှော်လင့်ပါတယ်။ :)
ဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်စတော့ဟုမ်းအပေါ် Ida Sjöstedt
ပုံစံ, ပုံ, လူ, ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ | | rating:5/ 30